China Mandarin Orange vagadziri uye vanotengesa | Heritage
Iyo nyowani mandarin orange inobva kuHuangyan ine chigadzirwa cheGeographical Indication. Isu tinoshandisa yakakurumbira mbishi zvinhu kuona mhando.
Huangyan orenji, zvine mwero zvinotapira uye zvinovava, mellow kuravira, isina mhodzi; Heritage piona paruoko uchichenesa zvidimbu zveorenji, nekutonhora kutonhora mune yakadzika-tembiricha manyuchi, simbisa iyo acidity uye yakakosha Inonhuwirira, uye yakasarudzika kuravira.
Kubva payakatangwa, yakakwezva kutarisisa kwevatengi vekunze nekune dzimwe nyika, uye zvakare yakakonzera iko kutevedzera kwepamba. Hwakanaka mhando, hunyanzvi hwetekinoroji, kumira muyedzo wemusika uye mutengi anotora. Hunhu hunhu-ruoko rwakabviswa orenji zvimedu flake kutendeka, nyama yakaoma, kuravira inotapira uye inovava, orenji nyama yakaputirwa neranjisi mesocarpon inonyatso kuoneka, uye goho chiyero chete 10%, chidimbu chimwe nechimwe boutique. Rehydration haina kupera, uye zvakare sarudzo yekutanga yemichero tii.
Hutano Bhenefiti yeMandarin Oranges
Mandarin maorenji, anozivikanwawo semamandarin kana mandarini, michero yemucitrus mumhuri imwechete semaranjisi, mandimu, marimu, uye grapefruit. Inofananidzwa neyakajairika orenji, mandarin maorenji idiki, anotapira, uye ari nyore kuona.
Tangerines rudzi rwemandarin ine yakadzika tsvuku-orenji ruvara uye ganda reganda. Clementines idiki, isina mhodzi yemhando yemandarin orange inozivikanwa nekuti inosvinwa zviri nyore uye inotapira zvakanyanya.
Mandarin maranjisi vane nhoroondo yavo yakavakirwa muChina yekare. Zita ravo - mandarin - chiratidzo cheizvozvo futi. Nekudaro, kubva pakutanga kwavo, vanga vari muchero unozivikanwa, unodakadza. Nhasi vanoramba vari zvakajairwa kuwedzerwa kumhuri dzakawanda. Ivo zvakare vanopa akasiyana ehutano mabhenefiti.
Haasi chete ma mandarini anofadza anotapira uye ari nyore kugadzirira, asi zvakare akatakurwa nemavhitamini, zvicherwa, uye antioxidants. Muviri wako unoda zvinhu izvi kuti ugare uine hutano. Heano mashoma emabhenefiti aunowana kubva pakudya ichi chidiki, chinonaka muchero.
Beta-carotene uye beta-cryptoxanthin ndiwo makomputa ayo anopa michero yemucitrus senge tangerines uye mandarins yavo yakadzika orange ruvara. Iwo ari antioxidants ayo anogona zvakare kubatsira kudzikisa njodzi yako yekuvandudza mamwe kanzira.
Mandarin maorenji ane akawanda beta-carotene uye beta-cryptoxanthin kupfuura akajairwa maorenji, achivaita iwo akawedzera kuwedzerwa kune kwako kudya.
Mutumbi unoshandura beta-carotene uye beta-cryptoxanthin kuita vhitamini A, iyo yakakosha kuhutano hwakanaka hwemuviri, kuona kwakanaka, uye kukura kwakajairika nekusimudzira.
Mandarin maorenji zvakare akanakisa sosi yevhitamini C, imwe yakakosha zvinovaka muviri yezvirwere zvemuviri, pamwe nekuchengetedza ganda rine hutano uye maronda ekuporesa. Vitamin C mune chikafu iri nani kunwiswa nemuviri pane mega-dose yevhitamini C iwe yaunowana kubva kune yekuwedzera.
Tinotenda mu:Kugadziridza mweya nemweya wedu. Yakakwira-mhando hupenyu hwedu.
Professional Mandarin Orange, Kambani yedu iri kushanda nekushanda musimboti we "kuvimbika-kwakavakirwa, kubatana kwakagadzirwa, vanhu vakatungamira, kuhwina-kuhwina kubatana". Isu tinoshuvira kuti tinogona kuve nehukama nehukama nemabhizimusi kubva pasirese.
Zvadaro: Ropa Orange
Mvura yakasviba Mandarin Orange
Yakaomeswa Mandarin Orange Peel
Yakaomeswa Mandarin Orange Zvimedu
Yakaomeswa Mandarin maorenji
Paradhiso Green Yakaomeswa Mandarin Oranges